I-Soybean Extract, i-Phellodendron Extract, i-Berberine Hydrochloride - i-Uniwell
Imigqa Emibili Yokukhiqiza
Eyodwa ulayini wokukhiqiza ophikisayo wamanje we-ultrasonic oqhubekayo futhi owodwa ulayini wokukhiqizwa kwamathangi wokukhishwa kwemisebenzi eminingi
Ngemuva kokuqeda ukukhiqiza nokuqedela ukuhlolwa ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo yakho ikhwalithi, sizothumela imikhiqizo yakho zingakapheli izinsuku eziyi-7 zosuku lwakho lokuqala lwe-oda. Yonke imikhiqizo ibuyiswa ngesiqinisekiso seminyaka emi-2.
Imishini yokuhlola esezingeni eliphakeme (i-HPLC, i-GC… njll) kanye nezinsiza, futhi yasungula uhlelo oluqinile lokuphathwa kwekhwalithi. I-onsite egadwe yi-QA nayo yonke inqubo yokuhlolwa kwekhwalithi yenqubo nge-QC.
Ephelele Ngemuva Kwesevisi
Perfect emva ukudayiswa ukuphathwa uhlelo. Ake sisekele izidingo zebhizinisi lakho ngokuhlinzekwa ngokushesha. Isampula yamahhala inganikezwa futhi iphendule ngokushesha.
umkhiqizo wethu afakiwe
ISichuan Uniwell biotechnology co., Ltd ibhizinisi elisezingeni eliphezulu eligxile ekwehlukanisweni nasekuhlanzweni kwezakhamzimba ezinsizeni zemvelo zemvelo. Le nkampani izinze eQionglai City, nezisekelo ezimbili zokukhiqiza eziseDongming County esifundazweni saseShandong naseQionglai idolobha laseSichuan Province.